Xaalada Lukaku, Fadeexada City Ee FFP, Haddii United Ay Soo Qaban Karto City & Waxyaabihii Kale Ee Jose Mourinho Uga Hadlay Shirkiisa Jaraa'id Ee Maanta | Laacib.net
Xaalada Lukaku, Fadeexada City Ee FFP, Haddii United Ay Soo Qaban Karto City & Waxyaabihii Kale Ee Jose Mourinho Uga Hadlay Shirkiisa Jaraa’id Ee Maanta
Jose Mouinho ayaa la hadlayay saaxafada ka hor kulanka Manchester Derby ee axada, waxaana uu ka warbixiyay xaalada weeraryahankiisa Romelu Lukaku kaasoo dhaawac ku maqnaa.
“Lukaku waxa uu tababar la qaadanayaa kooxda saaka” ayuu yiri Mourinho. “Haddii jawaabta ay noqoto mid niyadsan islamarkaana uu ka qeyb qaato tababarka berri markaas waa diyaar. Waqti xaadirkaan waxaan kaliya sheegi karaa inuu tababar la qaadanayo kooxda.”
Tababare Jose Mourinho ayaa sheegay inuu fahmay sida kulanka Manchester Derby uu muhim u yahay ka hor kulankii xilli ciyaareedkii hore markaasoo United ay ka soo kabsatay iyadoo 2-0 lagu hogaaminayo islamarkaana ay 3-2 ku garaacday deriskooda.
“Uma maleynayo in kulankaan uu muhim u yahay wixii dhacay xilli ciyaareedkii la soo dhaafay” ayuu yiri Mourinho.
“Waa kulan muhim ah sababtoo ah waa Manchester Derby, waana micnaha ay leedahay.”
Mourinho ayaa la weydiiyay haddii uu dareemayo in United ay kula tartameyso deriskooda City heer isku mid ah ka dib markii ay soo baxday fadeexadii la xiriirtay inay City jabisay sharciga dhaqaale wanaaga kooxaha Yurub ee FFP loo soo gaabiyo.
“Waa ay igu adag tahay inaan ka jawaabo sababtoo ah waxaan diirada saarayaa shaqadeyda” ayuu yiri Mourinho.
“Waxaan diirada saaraa kubada cagta. Haddii aad dooneysid inaan ka hadlo heerkooda kubadeed, waxaana dhihi lahaa waxa ay kubadu ka bilaabataa maalgelin.
“Ka dib waxaa ku xiga tayada shaqada iyo tayada maamulka, waxaana qabaa in City ay tahay lama taabtaan.
“Laakiin waxa ka danbeeya ee daaha gadaashiisa ah kama hadli karo.”
Ka dib markii ay United rogeelcelin qatar ah sameysay kulankii City ee xilli ciyaareedkii hore, islamarkaana ay rogaalcelin la mid ah sameeyeen kulamadii Chelsea, Bournemouth iyo Juventus xilli ciyaareedkan, Mourinho ayaa la weydiiyay sida ay United awood ugu yeelatay inay xilli danbe kulamada badiso.
“Ma dhihin koox is dhiibta.” ayuu yiri macalinka Man United.
“Waxaan nahay koox walba helo wado ay dib ugu soo dagaalanto, mararka qaarna natiijada waxbaan ka bedelnaa, mararka qaarna taasi ma dhacdo.
“Waxaan nahay koox leh isbiirit isku duuban oo aan dib ugu soo dagaalano, laakiin taasi mar walba suurtogel ma noqoto.
“Sidaasi darteed haddii aan ogolaano in kooxda naga soo horjeeda ay mar walba goolal inooga hormarto waxaa imaan doonta maalin aan rogeelcelis sameyn karin, taasi darteed waa inaan kulamada sida ugu fiican ku bilaabanaa.”
Markii la weydiiyay haddii fariinta uu ciyaartoydiisa u dirayo ka hor kulanka Manchester Derby ay tahay inay badiyaan oo farqiga u dhaxeeya iyaga iyo City ka dhigaan lix dhibcood.
Mourinho ayaa yiri: “Ma qabo inay taasi tahay habka loo eegi karo ciyaarta.
“Waa inaan kaliya ka fekernaa ciyaarta. Kulanka isagaaba ah mid adag. Laakiin haddii dooneysid inaad kulanka ku dabaqdo halka aan joogo iyo halka gaari karno markaas waxa ay ciyaarta sii noqoneysaa mid ka adag sidii hore.
“Waxaan kaliya doonayaa inaan kulan ahaan u dheelno. Waa kulan adag oo aan ka horimaaneyno koox adag laakiin ma qabo inay iyaguba u tahay ciyaar sahlan.”
09-11-2018 at 3:19 pm
J’ose Si fican bu uhdlay xaqiq